घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू इजेज पेरेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले नामको साथ ज्ञात एक फुटबल प्रतिभा को पूर्ण स्टोरी प्रस्तुत गर्दछ; "Ayo". हाम्रो अयोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय बाट उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ।
इयुज पेरे बचपन स्टोरी - यो मितिको विश्लेषण। अल्टोट्रोन र गोलमा क्रेडिट
हो, सबैले उनीहरूको बहुमुखीताबारे कुनै पनि आक्रमणकारी स्थितिमा अनुकूलन गर्ने बारे जान्दछन् जसले उसलाई "श्रीमती"। तथापि, फुटबलका केही प्रशंसकहरूले मात्र इज पेर्सको जीवनीमा मात्र एक हातमा उल्लेख छ कि धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, चल्न सुरु गरौं।
इजोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्न, उनको पूरा नाम इजज पेरेज गौतेरेरेज हुन्। इजेज पेरेज को रूपमा प्रायः भनिन्छ स्पेनको सांता क्रुज डे टेनेरिआमा 23 जुलाई 1993 मा। तल इयुज पेरेसको आमाबाबुको एक प्यारा फोटो हो जुन उत्तर-पश्चिमी अफ्रिकाको तटमा क्यानरी टापुका मूल निवासीहरू छन्।
Ayoze Perez आमाबाबु। Instagram को क्रेडिट
प्राय जसो फ्यानहरू विश्वास गर्छन् यसको विपरीत, अयोज पेरेजको परिवारको जरा स्पेनदेखि टाढा पश्‍चिम अफ्रिकी टापुबाट छ। यसको टापु स्पेनले उपनिवेश गरे र एट्लान्टिक महासागरमा अवस्थित, मोरक्कोको १०० किलोमिटर पश्चिममा जुन यो सबैभन्दा नजिक छ।
Ayoze Perez को पारिवारिक पृष्ठभूमि र उत्पत्ति। एमजे, प्रिमियर लीग र विकिपीडिया संग क्रेडिट गर्न यात्रा।
मध्य-परिवारको पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट बढ्दै गएको, इजले आफ्नो सानो भाइ र आमाबाबु सँगसँगै चित्रण गरेको शमूएल वा सैमी नामको ठूलो भाइसँग धेरै समय बित्यो।
इजेज पेरेजको परिवार। Instagram को क्रेडिट
इजेज पेरेज एक धार्मिक घर मा पनि ईसाई धर्म को एक रोमन क्याथोलिक शाखा ले हो जो यो Tenerife मा निवासियों को 84.9% को गठन को एक प्रमुख धर्म समुदाय हो।
इजोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
इजेज पेर्सले चित्रण गरे, उनको भाइ शमूएलले सही चित्रण गरे। Instagram को क्रेडिट
1990s को अन्त को समयमा, नीनेज टनेरिजी को आइज र उनको ठूलो भाइ सैमी द्वारा बनाईएको फुटबल को शोर नियमित रूप देखि परेशान हुनेछ। उनीहरू बढ्दै गर्दा, जोडेले हरेक दिन मैदानमा र आफ्नो पारिवारिक घर भित्र फुटबल खेल्थे।
ती व्यक्तिहरु जसले तिनीहरूलाई फिर्ता जान्थे तब दुवै केटाहरूलाई भविष्यका ताराहरूको रूपमा वर्णन गर्थे जसले उनीहरूको खेलप्रेमीमा अनन्य जडान र टेलिपाथिक समझ थियो। शुरुमा दुई केटाहरू अकादमीको माध्यमबाट फुटबल शिक्षा प्राप्त गर्ने सपनामा थिए। इनडोर शूटिंग अभ्यास को एक विकल्प को रूप मा, इज पेरेज को आमाबाबु को फैसला गरे कि उनको छोराहरु Tenerife को अकादमी अकादमी, सीडी San Andrés को whisk।
इजोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
फुटबलको लागि जुनून र उनीहरूको प्रतिभा को प्रदर्शन गर्ने आवश्यकता देखा पर्यो, इयुज र सैमी दुवैको स्थानीय पक्ष, सीडी सान एन्ड्रान्सको रोस्टरमा नामांकन गरिन्।
एजले आक्रमणकारी मिडफिल्डरको रूपमा खेलेका थिए, तिनका जेठा शमूएलले अग्रता लिएका थिए। तिनीहरूका आमाबाबुले सहमति लिएका थिए कि दुवै छोराहरू एकैचोटीमा खेलिरहेका थिए ताकि तिनीहरू सँगसँगै रहन सकेन। एउटै टोलीमा एकैसाथ एकैसाथ एकजना टोलीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा इयुजले ठूलो खेलाडीका साथ खेलिरहेका थिए जसले उनलाई परिपक्व छिटो बनायो।
सीडी सैन अन्ड्रेजमा4वर्ष बिताउन पछि जवान आइजले युने सांता क्रुजलाई एक अज्ञात कार्यक्रममा एकेडेमीको उपाधि जितेकी थिइन्। युनिभर्सिटीमा युवा खेलाडीले सेन्निभ अकादमीको लागि प्रसिद्ध गरेका थिए जुन आइल्याण्डको सबैभन्दा ठूलो फुटबल एकेडेमीहरू हुन पुग्यो।
इजोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि कथा
इजेजको महत्वाकांक्षा र तेर्नेरिको साथ एक वरिष्ठ फुटबल खेलाडीको लागि प्रार्थना गरेन फैंसी।
इजेज पेर्सको रोड फेम स्टोरीको। विश्व फुटबलको क्रेडिट
वर्ष 2011 र 2012 ले आफ्नो युवा क्यारियर मा मोड बदलिन्छ। यो वर्ष त्यो क्रमशः Tenerife बी र ए को लागि पदोन्नति भएको थियो।
रियल म्याड्रिड र एफसी बार्सिलोना अस्वीकार:
योजले Tenerife सँग छाप सुरु गर्न लामो समय लागेन। अक्टोबर 2014 मा, अयोजले 2013-14 सेगुन्जु डिविसिसको निर्णायक खेलाडीलाई जित्यो। उनले 2013-14 Segunda División पुरस्कारमा सर्वश्रेष्ठ आक्रमणकारी मिडफिल्डर पनि जिते।
इयुजले सिगunda डिभिजनको प्रभावकारी प्रदर्शनको लागि धेरै चाँडै वरिष्ठ रैंखहरू सार्नुभयो। यो देख्यो रियल म्याड्रिड र बार्सिलोना 2014 को गर्मी को समयमा उनको आसपास घूमना। ठूला क्लबहरूमा स्केड गरिएको यो न्यूकैसल थियो जसले वास्तवमा इजोजमा हस्ताक्षर गर्न चाहन्थे।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… इजज पेरिस भाइ पनि एक फुटबलर थिए जो त्यहाँ क्लब संग आफु को फिक्सिंग को आशा संग इंग्लैंड को आफ्नो भाई को पालन गर्न को लागि उनको क्लब को त्यागने को लागि छोड दिए। दुई भाइहरू जसले उत्तरी टेनेरिभमा धूप सांता क्रुज छोडेका छन् कि उनीहरूलाई नयाँ क्यासलमा आफ्नो सपना बुझाउन।
अयोज र सैमी आफ्नो सपनाहरु सँगै बाँच्दै। क्रनिकल लाइभको क्रेडिट
इजोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
न्यूकासलले इजको लागि पाउन्ड2मिलियन भुक्तानी गरे जुन आधुनिक खेलमा एक मूंगफली शुल्क हो। न्यूकैसलमा पुग्दा, इजज तिनको भाइ शमूएलसँग एकै ठाउँमा गए।
दुवै भाइहरूले शहर, भाषा, मान्छे, संस्कृतिलाई अनुकूल गर्न सिक्न थाल्छन्।
एक पल्ट पेरिसले भन्यो। "मेरो ठाउँ कुनै ठाउँ छैन, जहाँ यो इङ्गल्याण्डमा अवस्थित थियो, सबै कुरा। यो हेर्नको लागि अचम्मलाग्दो थियो, नयाँ क्यालेन्डर कति राम्रो थियो। हो, म मेरो भाइ संग जान्छु जब म पहिलो हुँ। मैले चाँडै नै हस्ताक्षर गरेपछि उनले मलाई निर्णय गर्न सकेन, नह, मैले उनलाई कहिल्यै सोधे, त्यो बस आयो! हामी सबै तरिका सँगैसँगै छौं। "
यो टिइनसेडका भाइहरूको लागि ठूलो वर्ष भएको थियो जुन उनी घर फर्कन्छन्। त्यहाँ राम्रो क्षणहरू छन्, फुटबलको खराब क्षण। लेखन को समयमा, आक्रमणकारी मिडफिल्डर छ उनीहरूको विनाशकारी साझेदारीमा उच्च र शक्तिशाली हुनुहोस् Salomón Rondón.
इजज पेरेजको उदयमा फेम स्टोरी। क्रनिकल लाइभको क्रेडिट
एलन शेरर जस्तै, अयोज न्यूकैसल कथाको रूपमा सधैं सम्झना हुनेछ। बाकि, तिनीहरू भन्नाले, अहिले इतिहास हो।
इजोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
अयोज पेरिसको प्रसिद्धिको उदय संग, सबै को होंठ मा प्रश्न छ ...एजेस पेरेजको प्रेमिका, पत्नी वा वाग कसलाई?.
इजेज पेर्सको गर्लफ्रेंड। Instagram को क्रेडिट
इज पेरेजको सम्भावित लुकेका रोमान्स एक छ जसले निश्चित रूप देखि सार्वजनिक आँखा को जांच मात्र बचाउँछ किनकी उनको प्रेम जीवन धेरै निजी छ। सालोंमा, इजेज पेरेज आफ्नो क्यारियरमा फोकस गर्न मनपर्छ र आफ्नो निजी जीवनमा कुनै पनि रोशनीबाट बचाउन खोजेको छ। यो तथ्यले हामीलाई हाम्रो प्रेम जीवनको बारेमा कुनै ठोस जानकारी राख्न कठिन बनाउँछ।
तथापि, एक विश्वसनीय रिपोर्ट को अनुसार, इजज पेरेज एक प्रस्ताव को पहिले3साल भन्दा बढी को लागि उनको ज्ञात प्रेमिका संग भएको थियो। FootallImagines को अनुसार;
"इजज पेरेज उनको साथ टाढा जान्छ र उनी सोच्छ कि उनी उनको साथ तोड्न जाँदैछन्, तर यसले उनीहरूलाई (मिलान पछि पिचमा) प्रस्ताव गर्ने योजना बनाउँछ।" यो मानिन्छ कि उनीहरु अब विवाहित हुनु पर्छ।
इजोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
अजज पेरेज व्यक्तिगत जीवनलाई जान्न पाउँदा फुटबलबाट तपाईले एक पूर्ण तस्वीर पाउनुहुनेछ। सुरू गर्न, पेरेस भावुक, उदार, नम्र-मनपर्दो, उत्साहित छ। यसले उसलाई फुटबलको दाबी गर्दैछ।
अफगानिस्तानमा सामाजिक सञ्जालका साथ आउँदो, उनीहरु को हो जसले धेरै सम्मान पाएको छ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… पेरेज न्यूकोसलको आधारभूत दूतावास हो। अक्सर, उनी फुटबल को करिश्मा माध्यम ले बच्चाहरु संग सामाजिक सहभागिता को लागी स्कूल मा उठ्छन्।
इजेज पेरेज व्यक्तिगत जीवन तथ्य - Instagram को क्रेडिट
इजोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- पारिवारिक जीवन
Tenerife देखि Tyneside सम्म, इजज पेरेज परिवार आफ्नो न्यून छोरा को सफलता को लागि धन्यवाद न्यूकैसल मा एक घर पाईयो। तल एक भिडियो हो जुन पेरिस परिवार द्वारा मौनशीलता को एक क्षण को दर्शाता छ जब उनि आफ्नो सबै भन्दा सफल पारिवारिक सदस्य को जन्मदिन मनाते हो।
Ayo को सामाजिक मीडिया खाता र परिवार भिडियो माथिको न्याय, तपाइँ सजिलै महसुस गर्नुहुन्छ कि उनी पिताको भन्दा धेरै आमाको नजिक हुनुहुन्छ। यद्यपि, इयुजको आफ्नो आमाबाबु को सहज छ सुनिश्चित गर्न को भक्ति र सामाग्री फुटबल को लागि उनको प्रतिबद्धता को समान छ।
इजेज पेरेजको आमा Instagram को क्रेडिट
उनको भाइको बारेमा थप: शमूएल पेरेज गुउटेरेरेज मार्क्स एक्सएनएक्सएक्स, जेएनयुमक्समा जन्म भएको थियो जुन उनी आफ्नो भाइ इजेज भन्दा तीन वर्षको उमेरमा छ।
इजज पेरेज भाइ-शमूएल। Instagram को क्रेडिट
बिग सैमीलाई सधैँ फुटबलमा सबैभन्दा बढी हेरचाह भाइहरू को रूपमा सम्झन सकिन्छ। पहिले नै अवलोकन गरिसकेपछि उनले आफ्नो भाइ बस्थे र तिनलाई आफ्नो भाइ सँधै आफ्नो क्यारियरको दिशामा घुम्न समेत कम्पनीको सहयोग गर्नको अन्तिम अन्तिम बलिदान गरे।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… सैमीले आफ्नो भाइसँग न्यूकैसलमा बसोबास गर्दा गैर-लीग प्लेयर बन्नुभयो। इयुजको तीव्र वृद्धि जुन 2014 जूनमा टिनेसेसको आगमन पछि देखिने छ, उनको बुबाको यात्रा ग्लैमरस र कम राम्रो तरिकाले दस्तावेजबाट टाढा रहेको छ।
Ayoze पेरिस सम्बन्धी बारेमा: पेरिसको परिवारमा सबै नरिका छोराछोरी फुटबल व्यवसायमा छैनन्। विस्तारित परिवार पनि। तपाईंलाई थाँहा थियो?… इजेजको चचेरे भाई मारिया जोसे पेरेजको रूपमा लेखिएको समय लेटेन्ट यूडी फेमेमिनोको लागि र स्पेनिश महिला राष्ट्रिय राष्ट्रिय टोलीका सदस्यहरू पनि छन्।
इजेज पेरेजको क्यासले- मारिया जोसे पेरेज। YouTube मा क्रेडिट
उनको लगन देखि न्याय, तपाईं सजिलै संग पेरिस को निकट नजिक जस्तो ध्यान दिनुहोसगे।
इजोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- LifeStyle
स्थानान्तरणका अनुसार मर्कर, इज पेरेजसँग हालको बजार मूल्य 10,00 मिल € छ। £ 45,000 को उनको साप्ताहिक वेतन निश्चित रूप देखि उनलाई एक लाखपति फुटबलर बनाइन्छ। तथापि, ग्लैमरस जीवन शैलीलाई पारित गर्दैन।
इजेज उनको फुटबल धन को प्रबंधन को बारे मा स्मार्ट हो। यो पागलपन जस्तो बिताउँदैन, वा आफ्नो जीवन शैली परिवर्तन गर्दैन।
Ayoze Perez's LifeStyle Facts। Instagram को क्रेडिट
इजोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- अनियमित तथ्यहरू
नाम "Ayoze"प्राय: प्रायः केही फुटबल प्रशंसकहरूले नाइजीरियाबाट उत्पत्ति पाएको छ। यो नाम पश्चिम अफ़्रीका देशको ईगबो बोल्ने जनजातिलाई समानार्थी छ। साथै, इजेज पेर्सको उपनाम हो "Ayo"। यो उपनाम पनि नाइजीरिया को उरुग्वे बोलने वाला जनजाति द्वारा उत्पन्न भएको छ
इजेज पेर्स एक फिक्वेयर छ, एक मामला छ जो प्रशंसक र ब्लगर्स गलत छ कि केहि सैंटियोगो मुनिज को तस्वीर मा उनको बचपन को समयमा इयोज को तस्वीर मा गलत छ।
इजेज पेरेज अनकन्ट तथ्य - उनको दृष्टिकोणको बारेमा। ट्विटरमा क्रेडिट
इयुज पेरे 1990s मा जन्म भएको थियो जुन प्रायः विश्व मा समृद्धि को एक दशक को रूप मा सम्झना गरिन्छ। त्यसो भए, 1990s ले सोभियत संघ गिर्यो र केटा बन्धन (Boyz II पुरुष, ब्याकस्ट्रिट केटाहरू र वेस्टलाइफ) संगीत चार्ट मा शासन गरे।
यस दशकले इन्टरनेटको वृद्धि देख्यो (विश्व वाइड वेब)। साथै 1990 को, पहिलो एसएमएस पाठ सन्देश पठाएको थियो, डीभिडीहरू आविष्कार गरियो, सोनी प्लेस्टेशन रिलीज गरियो र Google स्थापना भएको थियो। प्लेस्टेशनको कुरा गर्दै, इजेज एक फीफा एड्स हो।
इजेज पेरेज अनल्टड तथ्य - एफिफा प्रेमी। ट्विटरमा क्रेडिट
वर्तमान समयमा लेखन को समयमा, इजेज न्यूकैसल को सबै-समय लक्ष्य स्कोरर्स मा 13 स्थान मा छ। माइकल ओवेन अर्को पछ्याउँदै
इजेज पेरेजको न्यू क्यासल गोल्ड स्कोरिंग रेट। ट्विटरमा क्रेडिट
इजोज पेरिस बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Ayoze Perez बचपन स्टोरी प्लस अनटल्ड जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
प्रयास ज्योति जुलाई 1, 2019 मा 6: 16 अपराह्न
म सधैँ ayoze भेट्न चाहन्छु
जिम्बुबाबुबाट उनको ठूलो प्रशंसक हुँ।